War culus oo kasoo dhacay Gaalkacyo, Dilkii xalay & Xabsiyada oo buuxsamay
October 19, 2019 Mahad Jama 1
GALKACYO(P-TIMES)- Waxaa sii xoogaysanaya hawlgalada ay wadaan ciidamada amaanka gobolka Mudug kadib markii habeenkii xalay ahayd lagu dhex dilay qol uu ka deganaa Hotelka Al-Raxma ee magaalada Gaalkacyo madaxii kastamada gobolka Mudug ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland Xasan Cabdille Hiraabe oo xilal kala duwan hore usoo qabtay.
Dilka Hiraabe oo sababay casbi badan ayaa waxaa dilkiisa kadib hawlgalo xoogan ka sameeyey gudaha magaalada Gaalkacyo ciidamada amaanka kuwaas oo ugu dambeyntii gacanta kusoo dhigay dad badan.
Gaadiidka dagaalka iyo ciidamo badan ayaa lagu dhex arkayey habeenkii xalay xaafadaha magaalada, waxaana socday baadhitaano culus halka ciidamadu ay xabsiyada dhigeen cid walba oo looga shakhiyey dilka alle ha u naxariistee Xasan Cabdille Hiraabe.
Xaalada Gaalkacyo ayaa weli qasan, waxaana sii xoogaysanayey muddooyinkii ugu dambeeyey dilalka loo gaysanayo shakhsiyaadka ka tirsan dowladda halka ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada amaanku in ay wadaan baadhitaano ay kusoo saaraayaan cidii ka dambaysay dilka Hiraabe.
Wixii kusoo kordha warkaasi kala soco PUNTLADTIMES.COM
Malaa Wasiirka Kowaad ayaa lacag toos ugu soo dira, kuwa qaska wada. ( waa kan dowladda dhexe) hadda ka horna dhallin yaro lacag u qaybiyey.